Amakilabhu ama-Gay ahamba phambili & Izindawo zokudlela eBangkok | Izindaba Zokuhamba
Amakilabhu ama-Gay ahamba phambili namaBhari eBangkok
Izikhangibavakashi asia | | Bangkok, Ukuzilibazisa, I-Tailandia, Ukuhamba kwe-Asia
Lapho usunomqondo ojwayelekile wefayela le- Indawo yezitabane eBangkok, usukulungele ukunquma ukuthi kufanele uye kuphi. Iningi labantu liqala ubusuku babo endaweni I-Soi 4. I Ucingo lweBalcony, Roxy y sphinx Baphaka ukudla kanti abanye banenyuselo "yokuvakasha okujabulisayo" kanti abanye bavame ukuphuma njalo ngenyanga. Phakathi kuka-10 no-11 ebusuku, abantu baqala ukushiya le ndawo abaya kuyo Freeman (etholakala phakathi I-Soi 4 y I-Soi 2) noma futhi ukuze Isiteshi sikaJ (I-Soi 2), lapho isenzo sangempela senzeka khona.
isithombe isikweletu: Ngaphezulu? ~ ukuthola ngcono
Enye yezindawo ezaziwa kakhulu ku- USilom es UNkulunkuluKuvulwa kusukela ngo-9 ebusuku kuze kube sekuseni. Imile ekuhambeni okuncane phakathi I-Soi 2 y I-Soi 4, eduze kwe- Indawo yokudlela yaseNoodi. Lokhu kungenye indlela enhle kakhulu yabantu abahambayo Isiteshi sikaJ en I-Soi 2. UNkulunkulu (Abafana Ababoniswayo), iyiklabhu entsha enezindawo ezibanzi, isigqi sezinkanuko nezixuku ezinkulu, ezikhangayo. Ngakho-ke abantu baqala ukubhalisa, ngoba UNkulunkulu izokushiya ungawuvali umlomo futhi ngaphezu kwakho konke, ukungena mahhala.
isithombe isikweletu: Umbala Wefilimu
Ngakolunye uhlangothi, sinakho Isiteshi sikaJ, kuvulwa kusukela ngo-10 ebusuku kuye ku-2 ekuseni, nsuku zonke. Itholakala ku- USilom, I-Soi 2 Futhi uma ufuna ukushaya ukuthola okwengeziwe ngale ndawo, ungakwenza ku- +66 (0) 2 266 4029. Isiteshi sikaJ Idumile futhi sekuyisikhathi eside ibhekwa njengendawo eyintandokazi izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Ngokukhethwa kwezigqi zakamuva, Isiteshi sikaJYindawo ekahle yokuchitha ubusuku bokuzijabulisa. Isitezi sokuqala nesesibili esemidanso yamadoda enqunu, kanti isitezi sesithathu sinezihlalo ezinethezekile, ezilungele ukuxoxa nokuhlangana nabantu abasha.
isithombe isikweletu: UFredArmitage
I-Espresso Kuvulwa kusukela ngo-9: 2 kuya ku-XNUMX ekuseni, nsuku zonke futhi kutholakala nase- USilom, I-Soi 2. I-Expresso yindawo lapho ungaqabula khona futhi uvuselele khona. Kodwa-ke, kufanele sikuxwayise ukuthi ngoLwesihlanu nangoMgqibelo kuvame ukugcwala abantu. I-Espresso Yindawo ekahle yokuphuza, ukubona abantu abakhangayo futhi uhlangane nabantu abathandeka kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Bangkok » Amakilabhu ama-Gay ahamba phambili namaBhari eBangkok
Izikhungo zokuthenga ezihamba phambili ziseQueens
ISorbonne: INyuvesi yaseParis